ध्यान - यो मानसिक सम्पत्ति योगदान कि स्मृति को विकास र सोचाइ। प्रशिक्षण ध्यान यसको एकाग्रता बलियो बनाउन अनुमति दिन्छ, तर यो विशेष व्यायाम र प्रविधी को प्रयोग बिना गर्न सकिन्छ। यस प्रक्रियाको विकास सोच सक्दैन बिना गर्न, memorizing र जानकारी reproducing।
ध्यान यस्ता स्थिरता, वर्दी वितरण, एकाग्रता, distractibility र स्विच रूपमा गुण छ।
के को लागि व्यायाम ध्यान आवश्यक छ? सबै को पहिलो, आफ्नो कामको गुणस्तर र प्रभावकारिता सुधार गर्न। यसलाई आफ्नो एकाग्रता, अर्थात् बृद्धि गर्न आवश्यक छ एक विशेष वर्ग मा एकाग्रता को तीव्रता, जसबाट यसको कार्यान्वयन गुणस्तर सुधार।
अभ्यास व्यायाम धेरै सरल छ भनेर देखाउँछ: तपाईं बस एक दिन 10 मिनेट व्यायाम गर्न समर्पित गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि तपाईं लागि वस्तु चयन गर्न आवश्यक एकाग्रता। आफ्नो भूमिका मा कार्य गर्न सक्छन् दृश्य वस्तु (वास्तविक वा काल्पनिक), र ध्वनि। तपाईं कुनै पनि यस्तो वस्तु रूपमा चयन गर्न सक्नुहुन्छ शरीरमा बिन्दु वा श्वास प्रक्रिया।
यसको व्यवस्थापन र प्रशिक्षण सफल थिए केन्द्रित गर्न, तपाईंले केही अवस्था पालना गर्नुपर्छ:
अभ्यास को क्रमबद्घ पुनरावृत्ति तपाईं चयन गरियो। यसलाई केही महिनाको लागि 10-12 मिनेट एक वस्तुको ध्यान केन्द्रित गर्न उचित छ। यो सबै भन्दा राम्रो दिन को एकै समयमा गरेको छ।
प्रशिक्षण ध्यान बाहिर हुँदा, मस्तिष्क वस्तु भन्दा अन्य केहि द्वारा कब्जा गर्नुपर्छ। निस्सन्देह, यो तुरुन्तै, तर बिस्तारै हुनेछ। तर यो हासिल गर्न यो आवश्यक कुनै पनि मामला मा छ।
यसलाई आफ्नो शरीर सहज र तंग छैन स्थिति महत्त्वपूर्ण छ। यो गर्न, मेरुदण्ड मुद्रा सोझो र स्थिर बन्न कि निश्चित गर्नुहोस्। मांसपेशिहरु सीधा तनावमुक्त र आफ्नो टाउको हुन र सीधा राख्नु पर्छ। वस्तु ध्यान केन्द्रित गर्न भने, तपाईं एक दृश्य वस्तु रोजेको, यो 30 सेन्टीमिटरको दूरी मा र आफ्नो आँखा को स्तर मा हुनु पर्छ।
मनोवैज्ञानिक विशिष्ट अभ्यास लामो आफ्नो प्रभावकारिता र दक्षता देखाएको छ जो विकास, ध्यान विकास गरेका छन्। यहाँ मुख्य हुन्छन्:
औंला, eyebrows वा परेलाहरु: शरीर को कुनै पनि केन्द्रित छ। यो सुविधा मा सकेसम्म लामो समयसम्म राख्न प्रयास गर्नुहोस्। सुरुमा, यो धेरै गाह्रो हुनेछ, तर त्यसपछि तपाईंले एक विषयमा ध्यान गर्न सक्षम हुने बेला समय, वृद्धि हुनेछ।
, को नाडी: केही अर्थमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रयास गर्ने, खुट्टा, मा झुनझुनी को न्यानोपन। पनि सकेसम्म लामो समयसम्म ध्यान पकड।
केही monotonous सुन्छ, तर ध्वनि को अवधि। यो वर्षा को ध्वनि, को टिक घडी वा रेल यातायात हुन सक्छ।
तपाईं पनि चाँडै तालिम अर्को एक वस्तुको ध्यान स्विच गर्न आवश्यक छ। पहिलो, आन्तरिक भावना ध्यान केन्द्रित गर्न प्रयास गर्नुहोस्, र त्यसपछि वास्तविक देखिने वस्तु स्विच गर्न प्रयास गर्नुहोस्। पहिलो एकाएक स्विच, र त्यसपछि - बिस्तारै, र विपरित।
त्यहाँ प्रशिक्षण लिन्छ जो ठाँउ passively ध्यान केही व्यायाम, हो:
चालु आफ्नो पैदल, वा अन्य कुनै पनि दोहोरिने कार्यहरू केन्द्रित छ। को sensations पकड यी आन्दोलनहरु को ताल फसाउन प्रयास।
अनुभव छन् कि भावना केन्द्रित छ। आफ्नो परिवर्तन, modulations, spikes र मन्दहोता लाग्छ। भावनात्मक महत्वपूर्ण भाग मा आफ्नो भावना साझेदारी गर्नुहोस्।
lowering, क्याच स्वरको आरोह अवरोह, बोली ध्वनि: वाणी पालना गर्न प्रयास आवाजको टोन। परिस्थिति परिवर्तन को प्रक्रिया मा आफ्नो बोली परिवर्तन गर्ने फसाउन प्रयास गर्नुहोस्।
सबै समय मा सबैलाई उपलब्ध व्यायाम को निष्क्रिय फारम। कि व्यायाम सम्झना, तपाईं चयन र आफ्नो आविष्कार गर्न सक्नुहुन्छ, तथ्यमा आधारित छ कि तपाईं समयमा नजिक र थप सुविधाजनक।
हाम्रो कल्पना। गुण र सुविधाहरू
कसरी फिक्री को भावना को छुटकारा प्राप्त गर्न?
द्वन्द्व रोकथाम को विधिहरू। संगठन र स्कूलमा संघर्ष को रोकथाम
Mediocrity - यो आदर्श वा सामाजिक दुष्ट छ?
कसरी इन्टरनेट लत र जुवा को छुटकारा प्राप्त गर्न? आमाबाबुले लागि विशेषता लक्षण र सिफारिसहरू
साना केटा: आनन्द सम्भव छ?
Assertiveness - ... छ व्यक्तिगत जिम्मेवारी सिद्धान्त। सामान्य मनोविज्ञान
साइकिल मारिन: सबै भन्दा राम्रो मोडेल र समीक्षा एक सिंहावलोकन
को तैयारी, प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ र contraindications एक विस्तृत विवरण, अन्य उपयोगी जानकारी: "Tsitramon पी" मद्दत गर्छ के बाट
समय सकियो अनुरोध: कारण, सुधार
पानी सुरक्षित गर्दै। आफ्नै हातले ड्रिप सिंचाई
यूराल नदी - प्रकृति को एक महान सिर्जना
समीक्षा, लाभ र बेफाइदा: बच्चाहरु को लागि "Otipaks"